MUSTAF "xus ayaan u qaban doonnaa dadkii uu laayey maamulkii hore" - Halbeeg News
MUSTAF “xus ayaan u qaban doonnaa dadkii uu laayey maamulkii hore”
JIGJIGA (HALBEEG) – Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Mustaf Muxumed Cumar ayaa sheegay in xus loo qaban doono kumannaanka Soomaalida ah ee iyagoon waxba galabsan uu laayey maamulkii hore ee gobolka iyo kuwii la dilay iyaga oo ku jira halganka gobanimodoonka.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuu ku sheegay inaysan sinaba suuragal ku noqon doonin in layska hilmaamo dadkii usoo halgamay gobolka iyo kuwii iyagoon wax dambi ah geysan dulmiga laga galay.
Dambiyadii dagaal ee ka dhacay Deegaanka Soomaalida mar uu ka hadlayey, wuxuu sheegay in aan laga aamusi doonin, dadkii sida sharci darrada ah lagu dileyna aysan noqon doonin dhabbaneyaal la iska illaaway.
Qoraalka Mustaf Muxumed oo afka Englishka ku qornaa, wuxuu marka af Soomaali loo turjumo noqonayaa sidan hoos ku qoran:
“Qalbiyadeednnu waxay u dhiigayaan kumannaanka rag iyo dumarka ahaa ee uu diley maamulkii naxariista darnaa ee gobolku 27kii sano ee u dambeeyey iyo kahorba. Waxaan dhowaan qaban doonnaa xus wacyigelin ah, kaasoo aan ku xusuusan doonno dadkii inaka dhintay. Tobannaan kun oo Soomaali ah ayaa dhintay iyaga oo u halgamaya sidii ay dadkooxa uga xoreyn lahaayeen dulmiga iyo gumeysiga. Ma ahan in ay noqdaan dhibbaneyaal la iska illaawey oo qura, waa in ruuxdoodu ay agteenna baaqi kusii ahaataa. Dambiyada dagaal een aan dibnaha lasoo marin karin ee laga galay dadkeenna waa in la sheego”
— Mustafa Omer (@Cagjaromer) September 12, 2018
Hadalka Madaxweyne Mustaf ayaa kusoo aadaya xilli uu xabsi magaalada Addis Ababa ku yaalla ku jiro Cabdi Maxamuud Cumar oo ah madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida, kaas oo ciidamada milateriga ee Itoobiya Jigjiga ka qabteen bishii August ee lasoo dhaafay.
Maamulkii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu soo eedeeyey in uu geystey gaboodfallo bini aadamnimada ku baxsan kuwaaso isugu jiray dil, dhac, kufsi iyo jirdil lagula kacay dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin jamhadda ONLF iyo qaar kale oo lagu beegsaday inay mucaarad ku yihiin dowladda deegaanka.
Hay’adaha u dooda xuquuqul insaanka gaar ahaan Human Rights Watch ayaa dhowr mar oo hore warbixino kasoo saartay tacaddiyada ka dhaca gobolka Soomaalida ee ay geystaan ciidamada milateriga ee Itoobiya iyo ciidamada Liyu Police ee deegaanka Soomaalida.
Suuqa caanaha geela ee Soomaaliya oo kobcay
Garoonka Diyaaradaha ee Triboli oo madaafiic lagu weeraray